सुत्नु अघि पशुपतिनाथको दर्सन गरि भोलि २७ गते सनिबारको राशिफल पढ्नुहोस ! तपाइको भाग्य कस्तो ? «
सुत्नु अघि पशुपतिनाथको दर्सन गरि भोलि २७ गते सनिबारको राशिफल पढ्नुहोस ! तपाइको भाग्य कस्तो ?
Published : 11 September, 2020 9:45 pm
मेष – मान सम्मान बढ्नेछ । व्यवसायमा राम्रो योग देखिन्छ । आम्दानीको श्रोत बढ्नाले आर्थिक समस्या टर्नेछ । नोकरीमा लाभ एवं राजनीतिबाट फाइदा हुनुका साथै साताको अन्त्यमा भने खर्च बढ्ने र पारीवारिक समस्या हुनेछ ।
वृष– वैदेशिक काम बन्नेछ । घुमफिरको अवसर पाइनेछ । ठूलाबडाबाट आश्वासनका साथै प्रद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने देखिन्छ । साताको अन्त्यमा भने आकश्मिक लाभ प्रियजन भेटघाट र आफन्तबाट फाइदा मिल्नेछ ।
मिथुन – स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । आफ्नाबाट धोका मिल्नेछ । साताको मध्यमा विदेश यात्राको सम्भावना रहेको छ । भाग्यले साथ दिनाले अधुरा काम बन्नेछन् । साताको अन्त्यमा राजनीतिक फाइदा र जिम्मेवारी एवं आत्म प्रशंसा बढ्ने देखिन्छ ।
कर्कट– धनको सहयोग पाईनेछ । व्यापारमा फाइदा मिल्नेछ । प्रेमीप्रेमिकाबीच सम्बन्ध सुध्रिनेछ । साताको मध्यमा भने अपमान आउन सक्नेछ । स्वास्थ्यको समस्याले खर्च बढ्ने देखिन्छ भने साताको अन्त्यमा अधुरा काम बन्नेछ । विदेशभ्रमणकाे अवसर मिल्ने संभावना छ ।
सिंह– साताकाे शुरूमा समस्या पर्न सक्छ । शत्रुहरुबाट बच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा भने सुधार हुनेछ । स्त्रीबाट सहयोग मिल्नेछ । वैवाहिक कुराकानी चल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने मानसिक तनाव बढ्ने र गरेको काम बिग्रिन सक्छ ।
कन्या– विद्यामा सफलता मिल्नेछ । सन्ततिबाट सहयोग पाइनेछ । मुद्दामामिलामा आफ्नो पक्षमा काम हुनेछ । आलोचकहरु तह लाग्नेछन् । साताको अन्त्यमा भने सानो यात्रा र आफन्तजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
तुला– मनमा अशान्ति एवं तनावले पिरोल्नेछ । पारीवारिक समस्याले सताउनेछ । घरायसी मनमुटाव बढ्नेछ । सन्तानको चिन्ताले खर्च बढ्नेछ । व्यापारमा भने फाइदा हुनेछ । साताको अन्त्यमा विरोधीले काम बिगार्न सक्छन् ।
वृश्चिक– उत्साह बढ्नेछ । दाजुभाईबाट फाइदा मिल्नेछ । साताको मध्यमा समस्या बल्झिनेछ । काम अधुरा रहनेछन् । घरायसी झन्झट बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा धन प्राप्तिको योग छ । सन्तानबाट सुख बढ्ने र बौद्धिक क्षमता बढ्नेछ ।
धनु – पारीवारिक भेटघाट हुनेछ । मीठो भोजनको अवसर मिल्नेछ । अचानक धन सम्पति प्राप्ति हुनेछ । आफन्तबाट सहयोग पाइनेछ । छाेटाे यात्रा हुनेछ । साताको अन्त्यमा भने स्वास्थ्यले बाधा तथा मनमा अशान्ति तथा पारीवारिक झै झगडा हुनेछ ।
मकर – प्रेममा मनमुटाव आउनेछ । काममा सन्तुष्टि मिल्दैन । खर्च बढ्नेछ । शरीरमा कमजोरीपन आउनेछ । केही सरसामान हराउन सक्ने तथा यात्रामा झन्झट आउनेछ । साताको अन्त्यमा भने आकश्मिक लाभ तथा व्यापारमा राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ ।
कुम्भ – नोक्सानी व्यहाेर्नु पर्नेछ । धनको चिन्ता हुनेछ । आफन्तबाट धोका मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । साताको मध्य तथा अन्त्यमा भने पारीवारिक सुख एवं व्यापार व्यवसायबाट राम्रराे आम्दानी हुनेछ । आर्थिक सहयोग पाइनेछ ।
मीन – संगीतमा रुचि जानेछ विद्यामा प्रगति हुनेछ क्षमताको कदर पाइनेछ । मनमा द्विविधा बढ्नाले काम अधुरो रहनेछ । राजनीतिमा सफलता मिल्ने तथा नोकरीमा पदोन्नतिको सम्भावना एवं गरेको काममा प्रशंसा मिल्नेछ । साताको अन्त्यमा भने यात्रा तथा धार्मिक रुचि बढ्नेछ ।
पाथीभरा माताको दर्सन गरि आजको राशीफल पढ्नुहोस ! तपाइको भाग्य कस्तो ?
आज आइतबार सूर्य देवताको पुजा गर्दाधर्मशास्त्रका अनुसार मिल्नेछ यस्तो खुशी
साताको पहिलो दिन अर्थात आइतबार सबेका लागी महत्वपूर्ण हुन्छ । साताकै पहिलो दिन भएकाले मानिसहरुले
मदनकृष्ण श्रेष्ठ र पुण्य गौतमको पहिलो भेट ! कुलमानको पक्षमा लड्न तयार बर्ता बोल्दै नहिड्नुस (भिडियो सहित)
मदनकृष्ण श्रेष्ठ र पुण्य गौतमको पहिलो भेट ! कुलमानको पक्षमा लड्न तयार बर्ता बोल्दै नहिड्नुस
पहिलो भेटमै मदनकृष्णले दिए पुण्यलाई दरो दनक ! कुलमानको पक्षमा लड्न तयार छु, बर्ता बोल्दै नहिड्नुस (भिडियो सहित)
पहिलो भेटमै मदनकृष्णले दिए पुण्यलाई दरो दनक ! कुलमानको पक्षमा लड्न तयार छु, बर्ता बोल्दै
कुलमानको पुननियुक्त नहुने पक्का भएपछी सन्तोष र पुण्यको चर्काचर्की चल्यो बहस, मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै जंगीए (भिडियो सहित)
कुलमानको पुननियुक्त नहुने पक्का भएपछी सन्तोष र पुण्यको चर्काचर्की चल्यो बहस, मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्दै जंगीए
मदनकृष्ण श्रेष्ठ र पुण्य गौतमको पहिलो भेट ! कुलमानको
पहिलो भेटमै मदनकृष्णले दिए पुण्यलाई दरो दनक ! कुलमानको
कुलमानको पुननियुक्त नहुने पक्का भएपछी सन्तोष र पुण्यको चर्काचर्की
सुत्नु अघि पशुपतिनाथको दर्सन गरि भोलिको राशिफल पढ्नुहोस !